Tantara 10 momba ny mari-panondroana mainty sy vazimba avy ao Amerika Latina tamin’ny taona 2021 · Global Voices teny Malagasy
Notaterin'ny mpanoratra vazimba sy Afro-Latino izay manandanja amin'izy ireo
Voadika ny 04 Janoary 2022 5:01 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Italiano, عربي, українська, English
Fandravahan'i Isela Xospa, misy copyright fa nahazoan'i Global Voices alalana.
Tamin'ny taona 2021 ny mpandray anjara avy any Amerika Latina ato amin'ny Global Voices nifantoka tamin'ny fitantarana sy lahatsoratra momba ny mari-panondroana vazimba sy mainty, ny fanaovan-gazety ary ny zon'olombelona. Nitatitra ihany koa momba ny fisoloantena vazimba ao amin'ny fampitam-baovao sy ny ahiahiny ho amin'ny tontolo iainana ny mpandray anjara hafa.
Manodidina ny vahoaka 50 tapitrisa avy amin'ny vondrom-poko 500 no manondro tena ho vazimba ao Amerika Latina. Araka ny UNESCO, 8 isanjaton'ny mponina ao amin'ny faritra no vazimba, na dia mety hiovaova aza ny fanombanana. Tamin'ny taona 2009, nanombana ny kongresin'i Etazonia fa ny 27,7 isanjaton'ny mponina ao Amerika Latina no taranaka Afrikana.
Voahilikilika niaraka tamin'ny vahoaka vazimba nandritra ny fotoana maharitra tao amin'ny fiarahamonina sy tao amin'ny fampitam-baovao hatry ny ela ny Afro-Latinos. Vakio ireto tantara folo avy amin'i Amerika Latina miteny espaniola ireto.
Ny lovan'i El Mallku ao Bolivia: ‘Fototra ny fizakan-tena’ ho an'ny vahoaka indizeny [mg: dika amin'ny teny malagasy]
Boliviana Aymara mpanoratra Ruben Hilari no nilaza ny tantaran'i Felipe Quispe Huanca, fantatra ho “El Mallku”, sy ny lova navelany ho an'ny vahoaka vazimba ao Bolivia noho ny fahalasanany tamin'ny Janoary 2021.
Pikantsary avy amin'ny lahatsary fanomezam-boninahitra an'i Felipe Quispe avy amin'i ‘Videos Bolivia‘ ao amin'ny YouTube, namboarin'i Global Voices. Tsy fantatra izay naka sary ny orizinaly.
‘Lakilen'ny fanakanana ny famafana anay ny famerenana amin'ny laoniny ny mari-panondroana teratany Amerikana Afovoany’
Artista mainty sady Maya avy ao Honduras, Samaria Polet Carias Ayala, no nanoratra ny fomba handresena (manoloana) ny famafana ny vahoaka vazimba ao Amerika Afovoany. “Manomboka amin'ny fitiavana ny hoditsika volontany izany,” hoy ny nosoratany.
Hosotra avy amin'i Samaria Polet Carias Ayala, nahazoana alalana.
Avy any Meksika hatrany Aostralia, miverina mandinika ny aterineto ho an'ny fitenin-dry zareo ireo tanora teratany [mg]
Miisa 7.000 ireo fiteny misy manerana ny tany, saingy amin'ireo dia 10 monja no mibahana ny aterineto. Izany no mahatonga ny mpikatroky ny fiteny vazimba hatrany Meksika ka hatrany Aostralia nifamory anjotra tamin'ny Jolay 2021 hiresaka amin'izay hampitomboana ny fisoloantenan'ny fitenin-dry zareo sy ny fomba fijery izao tontolo izao ato amin'ny aterineto. Ity tantara ity no mamehy ny fehinteny lehibe amin'izany dinidinika izany.
Fandravahan'i , misy copyright fa nahazoan'i Global Voices alalana.
Nasaina aho hankalaza ny ‘Andron'i Colomb’. Toy izao no navaliko [mg]
Nahazo fanasana avy amin'ny Minisiteran'ny Kolontsaina hankalaza ny fetim-pirenen'i Espaina ao El Salvador ilay mpanoratra Afro-Salvadaoreana Carlos Lara tamin'ny 12 Oktobra, andro izay fantatra ihany koa ho “Andron'i Colomb.” Novaliany fa “Ny fetim-pirenen'i Espaina fanesoana sy fanafintohinana ho an'ireo vahoaka indizeny sy ho an'ireo taranaka Afrikana.” Nohazavainy ny anton'izany ao amin'ity andrana ato amin'ny Global Voices ity.
‘Andron'ny fifaharam-bahoaka vazimba sy mainty.’ Fandravahan'i Carlos Lara
Germinda Casupá, teratany Chiquitania miady amin'ny afo sy ny fanehoankerin-dehilahy
Notaterin'i Muy Waso, media boliviana mpiara-miombon'antoka amin'i Global Voices ny momba an'i Germinda Casupá, vehivavy vazimba miady ho fiarovana ny tontolo iainana tandindonin-doza ao Chiquitania, ala tany mafana maina lehibe indrindra eto ambonin'ny tany.
Germinda Casupá nandritra ny antsafa nifanaovany tamin'i Muy Waso. Saripika: Esther Mamani
Nandresy tamin'ny tolona manan-tantara ara-pitsarana ny fikambanam-pifandraisana tarihin'ny indizeny ao Meksika [mg]
Mpanoratra Meksikana Jacobo Nájera nitatitra ny fomba nahazoan'ny fikambanam-pifandraisandavitra tarihim-bazimba fandresena ara-pitsarana ahafahana manolotra fahazoana miresaka amin'ny finday amin'ny sarany mora ho an'ny vondrompiarahamonina an-toerana ao Oaxaca.
Haingo TIC. Nahazoana alalana.
Mivarotra aina ireo vazimba mpanangom-baovao miresaka tantara fanafahana ny fokonolona ao Colombia [fr]
Nitatitra ny maha-zava-dehibe ho an'ny vahoaka Kokonuco ao Colombia hanana ny fantsom-pifandraisana ho azy ireo manokana, antsoina hoe radiom-pokonolona tsy maka tombombarotra, noho ny fanavakavahana mahazo ireo vazimba mpanangom-baovao ao amin'ny faribolan'ny fanaovan-gazety ny mpitati-baovao Kolombiana Fernanda Sánchez Jaramillo.
“Micrófono en mano”: A painting on the wall of the indigenous radio station in Corinto, Cauca. Photo by Willian Mavisoy Muchavisoy.
Manatevin-daharana ny fitokonana tolom-pirenena ao Colombia ny vahoaka indizeny
Mbola i Fernanda Sánchez Jaramillo ihany no nitatitra momna ny vahoaka vazimba Misak, Awá, Kokonuco, ary hafa nanatevin-daharana ny hetsi-panoherana manantantara hisian'ny rariny sy fitsaboana bebe kokoa ao Colombia. Nosoritsoritan-dry zareo ny fahazaran-draharaha ao amin-dry zareo amin'ny fifaharana manoloana ny fanavakavahana sy ny tsy rariny ara-pikarakarana.
Claudia Pai sy ireo vehivavy Awá hafa mandray anjara amin'ny Minga sy ny fihetsiketsehana ao Colombia. Sary nampindramin'i Clever Bolaños, nahazoana alalana.
Melohin'ny vahoaka vazimba ny fitrandrahan'ny shinoa solika goavana ao amin'ny alan'i Amazônina ao Però
Tamin'ny fampiasana ny fomba fanadihadian'ny Civic Media Observatory ato amin'ny Global Voices, nokarokarohin'i Isolda Morillo ny fampiasam-bola mampiady hevitra nataon'ny orinasan'i Shina lehibe indrindra amin'ny solika ao amin'ny alan'i Amazônina ao Però. Nampiasa teti-panorona hanao izay hampidiran'ny fampiasam-bola shinoa azy ireo ao amin'ny paika fanapahan-kevitra ny fisoloam-bava sy fiarovana vazimba.
Saripika avy amin'ny mpikatroka DAR mampiseho ny sarintanin'ny Block 58, nahazoana alalana.
Mba hanomezana hery ireo olona ‘trans': ny fomba nataon'ny Salvadoariàna Nawat mpanakanto mba hanomezana aina vao ny teny iray azo lazaina ho efa saika fongana [mg]
Ilay mpanoratra Salvadoreana Eddie Galdamez no niantsafa tamin'i Petrona Xemi Tapepechul, izay mikendry ny hampiray hina vondrom-piarahamonina roa samy voahilikilika: ny mpiteny Nawat avy ao El Salvador sy ireo vahoaka trans.
Petrona Xemi Tapepechul. Sary nahazoana alalana ny famoahana azy.
Mankasitraka anao namaky ny Global Voices tamin'ny taona 2021 amin'izao mbola anohizanay manasongadina ireo feo tsy ampy fisoloan-tena avy ao Amerika Latina sy manerana izao tontolo izao ireo.